Taariikh nololeedkii Maxamed Axmed Kuluc – The official Somali Historical
Alle ha u naxariistee Maxamed Axmed Kuluc waxa uu ku dhashay deegaanka Raydab-khaatumo oo ka tirsan gobolka Togdheer,sanadkii 1935kii,waxbarashadiisii waxa uu ku qaatay Waqooyga Somalia Wakhtigii uu maamulayay Ingriisku.
Alle ha u naxariistii waxa uu fanka ku soo biiray sanadkii 1948kii isagoo ka mid noqday kooxihii ugu horeeyay ee laga aas aasay Cariga Somaliland xiligaasi oo ay socotay dabayshii gobonimo doonka .
Waxaanu Marxuumku xiligaasi calanka ka hor qaaday isla markaana Matalay riwaayado iyo heeso lagu wacyigalinayo bulshada inay iska ridaan heeryada gumaystihii ingriiska,kuwaasi oo ilaa maanta la xasuusto.
Marxuum Maxamed Axmed Kuluc waxa uu ka mid noqday kooxdii Walaalaha Hargaysa ee Ka hawlgali jirtay idaacada Radio Hargaysa,isagoo ka mid ahaa fanaaniintii habeenkii calanka laga taagay fagaaraha beerta xoriyada ka heesay halkaasi kuna luuqeeyay heeso ay ka mid ahaayeen,Aan Maalo Hasheena Maanqdeen oo Sameeyay Abwaan Saxardiid Maxmaed Jabiye Laxankana uu Saaray Alle Ha u Naxariistee Cabdiilaahi Qarshe.
Marxuum Maxamed Axmed Mudadii uu fanka ku jiray waxa uu ka qayb qaatay riwaayado iyo heeso iskugu jira Wadani,wacyigalin iyo Jacayl.
Marxuum Maxamed Axmed Kuluc waxa uu ifka Kaga Tagay Xaas iyo Caruur Iskugu jira Wiilal iyo gabdho iyo wixii ay sii dhaleen.
Marxuunka xukuumadda Somaliland ayaa u saari doonta guddi aas qaran u samaysa waxaana xafiiska wakaaladda wararka ee Somaliland si is daba jooga ah usoo gaadhaya tacsiayaha la gaadhsiinayo qoyskii iyo ehelkii uu ka baxay marxuunka .
Marxuum Maxamed Axmed Kuluc oo ilaa wakhtigaas ilaa maanta ka mid ahaa hormuudka iyo tiirarka waawayn ee Fanka.
Previous: Aqriso Taariikhda iyo Waayaha Nolaleedka Farxiya fiska, Fanka iyo Bilawgii
Next: Akhriso Taariikhda Fanaanada wayn ee Faadumo shiino